ᐈ Otu esi emepụta ndepụta M3U IPTV na 【2022】 - MFE.
M3U Spain ndepụta
Ndepụta IPTV Latin
Ndepụta M3U ndị ọzọ
Ndepụta na Plex
Lelee ndepụta M3U na VLC
Lelee ndepụta M3U na Roku
Budata GB WhatsApp Delta APK
BlackMart APK ụdị kacha ọhụrụ
Spotify Premium mod ngwa ngwa
Budata Deezer Premium MOD
Ụdị MX Player Pro kacha ọhụrụ
Budata Tinder Gold Mod
Ndepụta M3U IPTV kacha mma 2022
IPTV bụ teknụzụ nwere ọganihu dị ukwuu n'ime afọ iri gara aga, na n'ime njem a, ọ malitere ọtụtụ. Ugbu a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ikpo okwu ntụrụndụ ọ bụla na-enuba na-eji usoro a mepụta ndepụta M3U.
Ọ bụrụ na ịmabeghị maka ndepụta IPTV na M3U, ọkwa a bụ maka gị. Ị ga-achọpụta ihe niile gbasara protocol a ka ị nụ ụtọ nhọrọ ọ na-enye anyị na ntụrụndụ yana otu esi emepụta ndepụta M3U nke anyị iji tinye na sava IPTV anyị.
Kedu ihe ị ga-amụta ebe a?
Kedu ihe bụ ndepụta M3U?
Kedu teknụzụ M3U na-eji arụ ọrụ?
Kedu ọdịnaya enwere ike ịnụ ụtọ na ndepụta M3U?
Kedu na ebe ị ga-ebudata ndepụta M3U?
Gịnị bụ IPTV?
Kedu ihe bụ ndepụta ọwa IPTV?
Ọdịiche dị n'etiti IPTV na gụgharia
Otu esi emepụta ndepụta M3U IPTV nwere mmemme
Otu esi eme ndepụta M3U IPTV site na iji notepad na dezie ọwa
Kedu ihe ndepụta IPTV M3U Mexico Online gụnyere?
Ndepụta IPTV - M3U Mexico
Ndepụta M3U nke ọwa Mexico
Ndepụta ihe nkiri M3U sitere na Mexico
Ndepụta M3U kacha emelitere yana efu
Ndepụta IPTV - M3U nke Spain na egwuregwu
Ndepụta IPTV - Latịn na ụwa M3U
Ndepụta IPTV - M3U nke ihe nkiri na usoro
Otu esi etinye ndepụta M3U na Qviart Combo V2
Otu esi etinye ndepụta M3U na SS IPTV
Kedu ihe kpatara ịmepụta ndepụta na SS IPTV?
WhatsApp Delta kacha ọhụrụ
Ụdị M3U bụ ụdị ndọtị faịlụ dị larịị, nke enwere ike imeghe ma dezie ya na onye ndezi ederede ọ bụla, ọmụmaatụ, Windows notepad. M3U bụ okwu mkpọ okwu maka “ụdị MPEG 3.0 URL”.
A na-eji ụdị faịlụ a mepụta ma ọ bụ chekwaa ndepụta ọkpụkpọ mgbasa ozi ma ọ bụ ndetu egwu egwu.
Na mmalite ya bụ naanị Winamp kwadoro ya, mana taa enwere ike ịkwado ya site na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị egwuregwus, nke mere ka ọ bụrụ ọkọlọtọ ma a bịa n'ịmepụta ndepụta ọkpụkpọ.
Ihe ndepụta M3U na-eme bụ ịkọwapụta ọnọdụ faịlụ mgbasa ozi niile anyị chọrọ ịkpọ. Maka nke a, enwere usoro ederede akọwapụtara nke anyị ga-eji mgbe anyị chọrọ ịmepụta ndepụta nke anyị. Anyị ga-amụta nke a n'okpuru.
Ndepụta M3U bụ usoro adreesị webụ nke bụbu ebe dịpụrụ adịpụ nke ọdịnaya iji nwee ọ enjoyụ, ị nwere ike ịgụnye mmemme adịchaghị mma ma ọ bụ ọbụna ọwa zuru oke site na ebe ọ bụla n'ụwa, n'agbanyeghị ma ha bụ mpaghara, mba ma ọ bụ mba ụwa.
Ka ndepụta M3U rụọ ọrụ, a ga-atụkwasịrịrị ya na ọkpụkpọ mgbasa ozi na-akwado ụdị faịlụ a.. Ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa ọ bụla ma ọ bụ mmemme emebere iji kpọọ ọdịnaya multimedia nwere ike ịkpọ usoro faịlụ a n'enweghị nsogbu.
Ụdị ndepụta ndị a nwere uru na a na-emelite ha mgbe niile.N'ụzọ dị otú a, anyị agaghị echegbu onwe anyị banyere njedebe nke URL ebe a na-akwado data nke ọdịnaya multimedia nke kachasị amasị anyị.
Ndepụta M3U kacha mma maka IPTV na Spain 2022
Ndepụta Latino M3U kacha elu 2022
Otu esi emepụta ndepụta M3U maka Kodi
Otu esi ele ndepụta M3U na Roku
Otu esi etinye ndepụta M3U na Plex
Otu esi etinye ndepụta M3U na OTTPlayer
Otu esi ele ndepụta M3U na VLC
Ndepụta M3U nwere ike ịnwe ụdị ọdịnaya ị nwere ike iche n'echiche. Inwe ike ịchọta ndepụta pụrụ iche nke ọwa dị iche iche ma ọ bụ nwere ọwa mpaghara ma ọ bụ obodo akọwapụtara.
N'otu aka ahụ, ị nwere ike ịchọta ma ọ bụ chekwaa fim, usoro na akwụkwọ akụkọ n'asụsụ obodo gị ma ọ bụ n'asụsụ ndị ọzọEnwere ike ịchekwa ndepụta okwu maka nke ọ bụla n'ime ihe ndị a.
Enwere ike ịchekwa faịlụ mpaghara site na listi ọkpụkpọ M3U, ka ị nwee ike ịhazi usoro egwu, wee nwee ọ enjoyụ na listi ọkpụkpọ gị na ngwaọrụ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi.
Site na ndepụta M3U anyị nwere ike ịnụ ụtọ nkwanye ugwu dị ukwuu na ngwaọrụ ọ bụla ma ọ bụ site na ndị egwuregwu ọdịnaya ọtụtụ. Ọzọ anyị ga-akọwa ebe na otu ị ga-esi budata ndepụta M3U.
IPTV depụtara Spain
Ka ibudata ndepụta M3U ị ga-ebu ụzọ gaa njikọ a, wee tinye aha njirimara na paswọọdụ gị. Ọ bụrụ na ịnweghị ya, ị nwere ike ịmepụta ya ngwa ngwa site na isoro bọtịnụ "Sụ egwu" Ma ọ bụ ị nwere ike iji nyiwe nke Google, Facebook na Twitter mee ya ọbụna ngwa ngwa.
Ozugbo anyị banyere na ibe, anyị na-aga search mmanya na-ede aha nke ndepụta na anyị chọrọ ịchọ. Ọ dị ezigbo mkpa na ị na-etinye prefix mgbe niile "IPTV" o "M3U" nke mere na search engine na-eburu anyị ozugbo na ụdị ndepụta ndị a.
Ka ịchọta ndepụta emelitere gaa na igbe na-ekwu "Mbara" ma họrọ nhọrọ "Ụbọchị" ma mgbe ahụ ị ga-ahụ ndepụta niile kachasị ọhụrụ, yana na ha nwere ike na-arụ ọrụ n'ozuzu ha.
N'ikpeazụ, ị họrọ site na ịpị ndepụta nke masịrị gị, wee gaa n'ihu detuo adreesị nke pụtara na ogwe adreesị. Nke a bụ URL nke ị ga-e detuo n'ime ngwa IPTV gị ma ọ bụ n'ime ihe ọkpụkpọ multimedia ị na-eji.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata maka mmemme kacha mma na ndị egwuregwu ndepụta IPTV ma ọ bụ M3U ị nwere ike iwunye, lelee ndenye anyị ndị ọzọ ka ị wee họrọ nke dabara gị mma.
Ugbu a, nkuzi nke anyị kọwapụtara na-arụ ọrụ maka otu n'ime ibe kachasị ewu ewu iji chọta ndepụta M3U, mana nke a abụghị naanị webụsaịtị dị na udi ya. Ndepụta ndị a na-akọwa ibe weebụ ndị ọzọ maka ịchọta ndepụta M3U gị kacha mma.
stratustv: Ọ na-egosi gị usoro ndepụta n'ụdị M3U nke ị nwere ike itinye ma kpọọ ngwa ngwa. A na-ahazi ndepụta ndị a site na mba na n'asụsụ dị iche iche. Ndepụta nke ọ bụla nwere ọwa ọdịnaya dị iche iche maka uto ọ bụla na afọ ọ bụla.
ITVSSRC: Na ibe a ị nwere ike ịhụ ndepụta emelitere kwa ụbọchị. Ọ na-enye ndepụta na M3U nwere ụdị ọdịnaya dị iche iche na ọwa, usoro na ihe nkiri, na mgbakwunye na ọtụtụ asụsụ na maka afọ ọ bụla. Ọzọkwa dị ka uru agbakwunyere na ndepụta ọ bụla ị nwere ike ịhụ ọwa HD.
Ọ dabara gị: Ọ bụ n'ezie blọgụ na-ekwu okwu dị iche iche. Agbanyeghị, n'okpuru njikọ Ị nwere ike ịga ozugbo na ntinye nke na-egosi gị usoro ndepụta M3U emelitere yana na ị nwere ike ịchọta ụdị ọdịnaya ọ bụ, ebe ọ bụ na enyere iwu.
APK niile: Nke a blọọgụ nwere ntinye na usoro nke emelitere na kpamkpam free anatara. Iji nweta ha pịa ebe a.
Fluxus.TV: Na webụsaịtị a ị nwere ike ịhụ enweghị njedebe nke ndepụta na usoro M3U dị njikere imepụtagharị na-enweghị njehie n'ihi na a na-emelite ha mgbe niile. Ọdịnaya dị iche iche na ị nwere ike ịhụ usoro, ihe nkiri na ọwa maka afọ ọ bụla na n'asụsụ dị iche iche.
IPTV na-anọchi anya Internet Protocol Television, nke Ọ bụ nkà na ụzụ na-eji ụkpụrụ IP na ịntanetị na-ebufe ọdịnaya multimedia site na Streaming. A na-ejikarị ya na-ebufe ọwa, usoro na ihe nkiri na netwọk brọdband.
Iji netwọk brọdband na-ewepụ iji eriri na antenna na-akpasu iwe. IPTV bụ isi ndepụta ọwa a na-ebufe na ntanetị yana nke anyị nwere ike ịnweta na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ ọ bụlaEbe enwere ike ibunye ndepụta ndị a n'ime ngwa ọkpụkpọ ọdịnaya ọ bụla.
Enwere ụdị ndepụta nke a na-ejikarị na nyiwe IPTV, ha bụ ndị ejiri ndọtị M3U mebere. Ka anyị hụ ihe ha na-ekwu na otu anyị nwere ike isi mepụta ndepụta nke anyị site na IPTV.
IPTV bụ ihe ama ama n'ihi na ịchọghị ịkpọ onye ọrụ ka ọ nwee ọ enjoyụ ọdịnaya nkwanye, nke a na-ahapụ gị na mmefu ego nke bara ezigbo uru maka nchekwa akụ na ụba. Ọ bụrụ na emeghị nke ahụ, ị ​​nwere ike ịnụ ụtọ IPTV site na ndepụta IPTV ma ọ bụ M3U.
A na-eji ndepụta IPTV chekwaa adreesị ma ọ bụ URL nke a na-eji ọwa dị iche iche na-arụ ọrụ na IPTV nweta na webụ. iji adreesị IP dịpụrụ adịpụ.
Ndepụta IPTV nke anyị na-ahụkarị na ịntanetị na-abịa n'ụdị M3U, nke bụ usoro zuru ụwa ọnụ n'ụzọ ziri ezi, yana nke dakọtara na ọtụtụ ndị na-egwu ọdịnaya multimedia, agbanyeghị, ị nwere ike ịhụ ndepụta IPTV na usoro M3U8 ma ọ bụ W3U.
Ma ọrụ ahụ na IPTV na nkwanye ugwu nwere ọtụtụ myirịta n'ihe gbasara njirimara ụfọdụ, agbanyeghị, enwere ụfọdụ ọdịiche na-enye uru pụrụ iche maka ọrụ ndị a ezubere maka ntụrụndụ.
Ọdịiche kachasị mkpa bụ na ndepụta IPTV na-eji netwọkụ nkeonwe, nke na-akwado mgbasa ozi nke data n'ụzọ dị ngwa na kwụsie ike.. Ka ọ dị ugbu a, ọrụ mgbasa ozi na-erute otu netwọk mepere emepe, nke anaghị ejikwa ya dị ka email na nchọgharị weebụ, ya bụ, netwọk enweghị nke raara onwe ya nye.
Na nkenke, ọrụ telivishọn gụgharia chọrọ njikọ dị elu, ebe ndepụta IPTV anaghị achọ ọtụtụ ihe achọrọ, yabụ enwere ike ịnụ ụtọ ọdịnaya na ọsọ ịntanetị na-adịchaghị elu.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ndepụta M3U, ị ga-ebu ụzọ mara na enwere usoro iwu pụrụ iche nke ị ga-echeta iji mepụta ndepụta M3U IPTV na-arụ ọrụ nke ọma.
Nhazi a bụ nke na-esote:
#EXTINF: (ogologo oge), (agwa), (aha ọwa)
Anyị ga-akọwapụta ihe protocol ọ bụla pụtara:
# EXTM3U: Ọ bụ iwu na idowe ya naanị na mmalite nke ederede. Iwu a na-agwa onye ọkpụkpọ na ndepụta a dị n'ụdị M3U agbatịkwuru ma nke a bụ n'ihi na o nwere ụfọdụ njirimara agbakwunyere na-enwetaghị na ndepụta M3U bụ isi.
#EXTINF: Ọ bụ iwu na-egosi ebe agbakwunyere metadata nke gụgharia ọ bụla na ndepụta ahụ amalitela. A ghaghị iji iwu a mgbe ọ bụla anyị chọrọ ịgbakwunye ọwa, ya bụ, ọ bụrụ na anyị depụta ọwa iri, iwu ahụ ga-apụta ugboro iri na ọwa ọ bụla.
Ọ na-esonyere ya na ụfọdụ àgwà nke multimedia anyị ga-emepụtaghachi. Ọ na-agụnye: ogologo oge, àgwà na aha nke ọwa.
A ga-ekewapụ nke ọ bụla n'ime ha site na oghere oghere. Ka anyị hụ ihe a na-eji nke ọ bụla n'ime àgwà ndị a.
Ogologo oge: dabara na oge atụnyere na sekọnd nke faịlụ mgbasa ozi a na-ajụ. PMaka ndepụta IPTV naanị parampat abụọ ka amara, uru efu (0) na uru mwepu otu (-1).
N'ozuzu, anyị ga-eji uru -1 gosi onye ọkpụkpọ na ogologo oge nke nkwanye ahụ adịghị edozi ma ọ bụ enweghị ike ikpebi.
Àgwà ndị a: Ọ bụ ozi mgbakwunye anyị chọrọ igosi n'ime onye ọkpụkpọ. Data ndị a nwere ike ịbụ ntuziaka mmemme, ntọala, akara ọwa, asụsụ na njirimara ndị ọzọ.Otú ọ dị nke a bụ nhọrọ.
Ahịrị aha nke ọwa: na-egosi aha ga-apụta na ihe ọkpụkpọ. A ga-eburịrị ya site na rikoma (,) na enweghị oghere ma rikọbọ gachara.
URL: N'ebe a, anyị ga-egosi URL ma ọ bụ adreesị weebụ ebe a na-akwado ọwa, usoro ma ọ bụ ihe nkiri anyị chọrọ ịgbakwunye na ndepụta ahụ.
N'otu aka ahụ, a na-ede adreesị ma ọ bụ ụzọ ebe a na-akwado faịlụ mgbasa ozi mpaghara ebe a, ya bụ, nke echekwara na kọmputa anyị.
Ugbu a ị maara nke a, anyị nwere ike ịmalite ịmepụta listi ọkpụkpọ nke anyị na usoro .m3u, na ihe mbụ anyị ga-eme bụ imepe editọ ederede dị ka sistemụ arụmọrụ anyị si dị.
Ihe ọzọ ga-abụ ịmalite ịgbakwunye ozi nke njikọ ndị anyị chọrọ imepụtaghachi na-eso usoro iwu nke anyị gosipụtara na mbụ. Icheta ha:
Cheta na iwu nke mbụ; ya bụ; Ekwesịrị ịgbakwunye # EXTM3U naanị otu ugboro n'ahịrị nke mbụ, ekwesighi ikwugharị ya site na ebe a gaa n'ihu. Ka anyị lee ihe atụ ụfọdụ nke iwu ndị a:
#EXTINF:-1, Ihe nkiri Nlereanya (2017)
N'ikpeazụ, ozugbo anyị gbakwunyere adreesị nke ọwa niile, usoro na ihe nkiri anyị chọrọ ịhụ, anyị ga-aga n'ihu ichekwa ya.
Na faịlụ taabụ, ị ga-aga na nhọrọ "Chekwa dị ka". Mgbe mpio na-esonụ gosipụtara, ị ga-achọrịrị ebe ị ga-echekwa faịlụ na na ngalaba aha ị ga-etinye aha ị ga-enye faịlụ ahụ. ma gbakwunye na njedebe nke aha ndọtị .m3u.
Ọ bụrụ na itinyeghị ozi a, yabụ agaghị enwe ike imepụtaghachi ndepụta ahụ site na ngwa ma ọ bụ mmemme ebe ịchọrọ imepụtagharị ndepụta ndị a.
Ugbu a emebere ndepụta nkeonwe gị, ị ga-agarịrị tinye ya na ngwa ma ọ bụ mmemme masịrị gị wee nwee ọ enjoyụ.
Ọ bụrụ na ị maghị ka esi etinye ndepụta a na mmemme ịkpọghachi azụ, ị nwere ike ịga na nkuzi anyị ebe anyị ga-akọwa nzọụkwụ site nzọụkwụ otu esi ebugo ndepụta M3U.
Anyị amaralarị na ndepụta M3U nwere ihe dị iche iche. N'ihe banyere ndepụta IPTV Mexico, ị nwere ike ịchọta egwuregwu obodo na nke mba ụwa, akụkọ, ihe nkiri na ọwa akwụkwọ..
Ụfọdụ ọwa nwere ike ịbụ:
Ụlọ ọrụ Telemundo International.
Ọwa 10 Chetumal.
Aztec Otu HD.
CableOnda Egwuregwu FC.
Na ndepụta IPTV ma ọ bụ M3U ị na-ahụ ọwa sitere na mba dị iche iche na asụsụ dị iche iche ma ọ nwere ike ọ gaghị abụ ihe ị na-achọ.
Yabụ, ọ bụrụ na ịnọ na Mexico ma chọọ ịchọta ndepụta ọwa na ihe nkiri Mexico, anyị na-ahapụrụ gị nnukwu ndepụta ga-enyere gị aka inweta ntụrụndụ kacha mma:
Ugbu a anyị etinyela mmemme na-akwado faịlụ M3U, naanị anyị nwere ike ilekwasị anya n'ịchọta ndepụta M3U kacha mma nke dị ọhụrụ yana 100% n'efu.
Ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ọ dịghị mfe ịchọta ndepụta ndị a, anyị Anyị emela ọchụchọ gị wee hapụ gị ndepụta M3U kachasị mma nke emelitere na nso nso a yana ohere ya bụ n'efu..
Qviart Combo V2 bụ satịlaịtị dijitalụ na TTDHD decoder ma ọ bụ nnata, nke nwekwara nkwado ọkọlọtọ DVB-T2 na DVB-S2. A na-agbasa ya nke ọma ma na-akwado ndekọ site na ọdụ ụgbọ mmiri USB abụọ ọ bụla, ọ nwekwara ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi nwere ogo onyonyo pụrụ iche n'ihi nkọwa 1080p FullHD ya.
Iji kporie ndụ, ị ga-etinyerịrị ọwa ọkacha mmasị gị ma ebe a bụ nhọrọ abụọ, site na listi na ọwa site na ọwa:
Nke mbụ, kwadebe ndepụta ndabere nke ọwa, wee:
Jiri ọwa tinye pendrive gị wee họrọ nhọrọ USB.
Họrọ bọtịnụ edo edo nke na-ekwu "Budata data".
Ngwaọrụ ga-ajụ gị maka conformation n'ụdị ajụjụ a “¿Elu elu? ", nke ị zara na"SI".
Oge iji "Budata ndepụta ahụ", na-ewepụ faịlụ ahụ.
Mgbe ị na-etinye pendrive na decoder, ị na-esi na ọwa 1 gaa NchNhr> Mgbasawanye> NchNhr USB.
Ị họrọ ndepụta.
Ọ ga-arịọ gị ka ị kwadoro"Ka imelite?"
Mgbe sekọnd ole na ole gachara, ị ga-enwe ike ịpụ na menu, wee gbanyụọ ngwaọrụ site na remote njikwa wee anụ ahụ si ya gbanyụọ button.
Mgbe ịmalitere ya ọzọ ka nkeji nkeji gachara, a ga-ebugorịrị ndepụta M3U na Qviart Combo V2 gị.
Cheta na: Ọ bụrụ na emelitebeghị ya, ị kwesịrị ịlele nhazi netwọkụ. Ma ọ bụrụ na ị nwere ọwa ọ bụla hapụrụ, ị nwere ike soro usoro ndị a.
Nzọụkwụ mbụ bụ ịbanye IPTV nhọrọ.
Mgbe ahụ ị ga-ahụ ihuenyo na-esonụ:
Wee họrọ nhọrọ na-acha uhie uhie nke na-ekwu "Tinye”Ka ịgbakwunye ọwa ọhụrụ.
Okwuntughe ndabara ga-abụ 0000, tinye wee gaa n'ihu:
Ị nwere ike tinye ọwa ahụ n'ụzọ dị iche iche:
URL foto: Site na ịhọrọ akụ ziri ezi nke iwu ahụ, ị ​​nwere ike tinye URL na onyonyo nke ga-abụ akara ngosi ọwa.
Video vidiyo: Nhọrọ ọzọ ị ga-ahụ mgbe ịpịrị akụ aka nri bụ ịbanye URL nke ọwa ahọpụtara na IPTV.
Ọkọlọtọ okenye: maka ọwa ndị okenye.
Mgbe ịbanye na URL ọwa wee họrọ OK, malite bulite ọwa.
Ọwa ọ bụla na-ebu ihe dị ka sekọnd 45.
Na ngwụcha ntinye ọ bụla, ibe mbụ ga-egosipụta taịlị. Nke a bụ ebe ị na-ahụ mmetụta sitere na ntinye ihe oyiyi sitere na ọwa. Ọ bụrụ na anyị etinyebeghị ya na onyonyo ọ ga-adị ka nke a:
6.Ka ịgbakwunye ihe oyiyi, dị nnọọ họrọ blue button na-ekwu "Dezie".
Site na usoro ndị a dị mfe ị nwere ike itinye ọwa nke mmasị gị na Qviart Combo V2 gị.
Anyị na-akwado ka ị na-agbaso nzọụkwụ site nzọụkwụ iji wụnye Ndepụta M3U na SS IPTV:
Gaa na ngwa ahụ SSIPTV na Smart TV gị.
Igbe mkparịta ụka a ga-emeghe:
3.Họrọ nke Ntọala, dị ka akụ na-egosi:
Ihuenyo a ga-apụta:
Ọzọ ị ga-ewepụta koodu njikọ. Họrọ nhọrọ Nweta koodu (Arrow 1), na koodu alphanumeric ga-emepụta nke ị ga-eṅomi (Arrow 2).
Ugbu a gaa na ukara page nke SSIPTV site na ihe nchọgharị gị site na ịpị ebe a
Ị ga-ahụ ihuenyo na-esonụ
Tinye koodu ebe o kwuru Tinye koodu njikọ (Akụkụ 1 na foto na-esote).
Họrọ Tinye ngwaọrụ (Akụkụ 2).
Ibe a ga-emeghe ebe ị ga-achọrịrị ebe ọ na-ekwu Ndepụta ọkpụkpọ mpụga wee họrọ n'ime gbakwunye ITEM.
Window mmapụta ga-emeghe
Na nke a, ị ga-etinyerịrị data ndị a:
Aha egosiri: Ndepụta aha. Dịka ọmụmaatụ: Ndepụta M3U m
Isi Iyi: URL nke ndepụta M3U nke ịchọrọ bulite.
Window mmapụta ga-emechi na ihuenyo ga-anọrịrị ebe ị ga-echekwa data etinyere, họrọ nhọrọ
Ugbua na ngwa nke SmartTV gị, ị ga-emelite ozi ahụ, na-ahọrọ akara ngosi wụnye n'elu aka nri nke menu:
Site ugbu a gaa n'ihu ị nwere ike ịlele ọwa niile site na njikọ nke gị.
Emechara arụnyela nke ọma Ndepụta M3U gị na SS IPTV.
Iji nwee ike ịmepụta usoro ọmụmụ ahaziri onwe ya, na iwepụ faịlụ ndị na-adịghị mkpa, ma ọ bụ na-agbakwunye ndị ọhụrụ. N'ụzọ dị otú ahụ ị na-azọpụta onwe gị nsogbu nke ịgbakwunye ha n'otu n'otu.
A ga-ebudatarịrị ndepụta ọ bụla na ngwaọrụ ma ọ bụ opekata mpe, echekwara ya na "Akaụntụ m", n'ihe gbasara iji ForkPlayer na Smart-TV.
Dị ka ihe dị mkpa ederede, ọ bụrụ na ịchọrọ ige egwu egwu, ma ị nwere njikọ ịntanetị dị mma, ọ dịghị mkpa ka ị chekwaa listi ọkpụkpọ. Ọ ga-ezuru naanị ibunye ya na ihe ọkpụkpọ, ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ PC.
ọla edo Australia
Budata ngwa WhatsApp Plus (AntiBan) ngwa kacha ọhụrụ
Budata Videoder Premium Apk 2022
Budata ngwa YouTube Music Premium APK kacha ọhụrụ
Ndepụta IPTV efu maka ndị okenye (emelitere 2022)
Ndepụta ọkpụkpọ akọrọ
Kedu otu esi ele ndepụta IPTV na Kodi?
© 2022 MtresU • kere ya GeneratePress